2019 Oct Sat 03:11:34
मिर्गौलाका घातक रोग केही मिनटमै पत्ता लगाउने ‘एप’
बीबीसी, २० साउन । मोबाइल फोनमा हुने एउटा एप मानिसमा घातक सिद्ध हुन सक्ने मिर्गौला रोग भए नभएको पत्ता लगाउन सहयोगी बनेको छ । मिर्गौलाको रोग केही मिनेटमै पत्ता लाग्न थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो विधिले बिरामीको जीवनरक्षामा सहयोग र्पुयाउन सक्ने बताएका छन् । सेप्सिसजस्ता गम्भीर प्रकारको रोग लागेका बिरामीको मिर्गौलामा हानि...
नेपालमा पास तर विदेशमा मेडिकल फेल: कुन-कुन संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी गएका कामदार फर्काइए? [नामावली]
मेडिकल फेल भएर कतारबाट फिर्ता आएका यादवले क्षतिपू...
जापान रोजगारी : पहिलो चरणमा नेपाली नर्स प्राथमिकतामा
चामलको माडले अनुहारलाई यसरी चम्किलो र मुलायम बनाउँछ
कामकाजी महिलाका लागि फिटनेस टिप्स
निरोगी, जवान एवं तन्दुरुस्त रहने १० सूत्र
तपाईंलाई शावर सेक्स मन पर्छ? निकै उपयोगी छन् यी टिप्स
पुरुषमा प्रायः तीन दिनमा यौनचाहना बढ्छ
यौन दुर्बलता समाधान गर्ने जडिबुटीको यसरी गरौँ पहिचान
यस्ता आयुर्वेदिक उपायले बढ्छ मस्तिष्कको क्षमता
आज महाशिवरात्री । शिवरात्री भन्नेबित्तिकै सबैले सम्झने कुरामा गाँजा पनि पर्छ । विशेष गरेर यस दिन शिव प्रसादको रुपमा गाँजालाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो समय शिवजीको प्रसादको रुपमा गाँजालाई लिए पनि गाँजाको दुरुपयोग भने धेरै भइरहेको छ ।...
हाम्रा शरीरभित्र विभिन्न परजीविहरु हुन्छन् । ती परजीविहरुले हाम्रो शरीरको पोषणहरु सोसेर खाइदिइरहेको हुन्छ । मानव शरीरका लागि हानिकारक तर हाम्रो शरीरभित्रै डेरा जमाएर बसेका त्यस्ता परजीविहरुलाई मार्नका लागि प्राकृतिक रुपमा नै केही खानेकुराहरु पनि पाइन्छन् । आउनोस्, त्यस्ता स्वस्थकर,...
महिलाहरु प्रायजसो गर्भवती भएको थाहा पाउन प्रेग्नेन्सी किटको प्रयोग गर्ने गर्छन् । कतिपय महिलाहरु मेडिकलसम्म गएर किट ल्याउन लजाउने हुन्छन् ।&nbsp; महिलाका लागि आवश्यक प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न घरेलु तथा प्राकृतिक तरीका पनि अपनाउन सकिन्छ । जसले गर्भवती भए नभएको पत्ता...
मानिसको जीवनमा स्वस्थ सम्बन्धी धेरै समस्याहरु उत्पन्न भइरहन्छन् । जसको समाधानका लागि हामी विभिन्न औषधिहरु सेवन गर्छौं ।&nbsp;तर, कतिपय अवस्थामा भने हामी आफैं आफुखुशी औषधि किन्छौं र सेवन गर्छौं । डाक्टरलाई जाँच नगराई त्यसरी आफै औषधि किनेर सेवन गर्नु हाम्रो...
घरमै पाइने यी हुन् प्राकृतिक एन्टिबायोटिक
त्यस्ता व्यक्ति कमै होलान्, जो दिनको शुरुआत चिया अथवा कफिबाट गर्न चाहाँदैनन् । बिहानको चियाले तपाईंलाई दिन भरि नै ताजा अनुभव गराई राख्छ । चिया पिउनका लागि हिजोआज घरमा समेत प्राय टी ब्यागको प्रयोग गर्न थालिएको छ । मानिस दिन भरिमा ३ अथवा ४ पटक चिया पिउने गर्छन् । त्यसक्रममा चिया बनाउनको लागि प्रयोग हुने टी ब्याग डस्टबिनमा फ्याँकिदिन्छन्...
नाटकीय रुपमा मोटोपन घटाएकी मोडल : १०८ बाट ६३ किलोमा कसरी आइन्?
'पायल्स भनेर बस्दा क्यान्सर पनि हुन सक्छ'
के हो नाकको एलर्जी?, कसरी बच्ने?
उचाइ बढाउन सम्भव छ ?
के हो पिरियडिक माइग्रेन ?
काठमाडौँ — अमेरिकाको ब्राउन विश्वविद्यालयमा भएको एक...
साउन १५ अर्थात् खीर खाने दिन। नेपाली समाजमा ‘असार १...
सिजन आँपको छ। आँपलाई स्वादका निम्ति खानेकै सँख्या ठूलो छ।...
कृषिप्रधान देश नेपालमा 'मानो रोपेर मुरी उब्जा...
गर्मीमा उखुको रस सेवन जिब्रोको स्वाद बढाउने मात्रै होइन यसले सम्भावित विभिन्न रोगबाट पनि टाढै राख्छ । उखुको रस सेवन गर्नाले एनीमिया, जण्डिस लगायत र...
लसुन, जो हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुन्छ । तरकारीको स्वादर वास्ना बढाउनका लागि लसुन उपयोगी हुन्छ । यद्यपी लसुनको साइनो स्वादसँग मात्र जोडिएको छै...
वर्षायामको खानेकुराः के खाने, कसरी खाने ?
वर्षायाम भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरु जोडिएर आउँछन् । चर्को घाम, चिटचिट पसिना, डिहाइड्रेसन, उकुसमुकुस, अल्छिपना, आलस्यता तथा शरीरमा हुने उर्जाका कमी...
भान्सामै औषधि : यी हुन् आपतकालिन उपचारमा प्रयोग हु...
हामी जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छौं। तर कतिपय अवस्थामा तत्कालै चिकित्सकहाँ जान असम्भव पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रोवरिपरि पाइने जडिबुट...
किन दुख्छ गर्मीमा टाउको ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उ...
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका सहित देशैभर तापक्रम बढ्दै गएको छ । तापमान बढ्नासाथ मानिसमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन थाल्छ । ती मध्येको एक हो...
आँखाको ज्योती राम्रो बनाउन घरेलु खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । पावरवाला चस्मा लगाउनेले समेत यी खानेकुरा खाने हो भने दृष्टिमा सुधार आ...
के कारणले हुन्छ बच्चाहरुमा यस्तो घाउ खटिरा ? जोगाउ...
सामान्यतया Entero भाइरसहरु बिशेषगरि Coxsackie भाइरस A16 तथा Entero भाइरस ७१ को संक्रमणले बच्चाहरुमा यस्तो समस्या देखा पर्छ । पोलियो Echo हरु प...
हाम्रा शरीरभित्र विभिन्न परजीविहरु हुन्छन् । ती परजीविहरुले हाम्रो शरीरको पोषणहरु सोसेर खाइदिइरहेको हुन्छ । मानव शरीरका लागि हानिकारक तर हाम्रो शरी...
प्याज– प्याजमा लिभर इन्जाइमलाई सक्रिय बनाउने क्षमता हुन्छ, जसले शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ।...
व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसको दैनिकी अव्यवस्थित र तनावग्रस्त बन्दै गएको छ । यस्ता तनाव र अव्यवस्थित जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाउन मानिसहरू योग, ध्या...
७० वर्षसम्म जवान देखिन दुधमा मिलाएर खानुहोस् यो औष...
शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा पूरा गर्नको लागि दुध पिउनु अत्यावश्यक छ । शरीरमा क्याल्सियमको कमि हुन नदिन हरेकलाई जन्मेदेखि नै दुध सेवन गराइन्छ । दूधले...